Rooble oo buriyay dhaqan caan ka ahaa gobolka Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Rooble oo buriyay dhaqan caan ka ahaa gobolka Gedo
Sii-hayaha xilka Ra’iisul Wasaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, ayaa noqday masuulkii ugu horreeyay ee taga gobolka Gedo, kana soo laabta isaga oo aan booqan qabiriga Maxamed Siyaaad Barre.
GEDO, Soomaaaliya - Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble, ayaa maanta dib ugu soo laabtay Caasimadda, kadib socdaal afar cisho qaatay oo uu ku tagay xarunta Jubbada dhexe ee Kismaayo iyo magaala madaxda gobolka gedo ee Garbahaarrey.
RW Rooble, ayaa shalay ka ambabaxay Kismaayo, waxuuna tagay magaala xuddunta u ah khilaafaadka Jubbaland, ahna xaruntii sababtay inuu burburo wadahadal kasta oo doorashooyinka la xariira, wixii ka horreeyay 27 May 2021.
Socdaalka Rooble ee Jubaland ayaa diiradda saarayay arrimaha hirgelinta doorashooyinka, dib u heshiisiinta, iyo xoojinta amniga, wuxuuna dhawaan ku soo laabtay Muqdisho.
Rooble, wuxuu buriyay dhaqan soo jireen ka ah Gedo, kaas oo ahaa in qofkii xil haya ee taga gobolka, uu booqasho ku gaaro qabriga Madaxweynihii hore ee Soomaaliya, Maxamed Siyaad Barre, kaas oo ku aasan Garbahaarrey.
Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta ayaa ka soo laabtay Gedo, isago oo aan booqan qabriga kaligiis-taliyihii Kacaaka, waxayna arrintaas abuurtay hadal heyn xooggan saacadihii la soo dhaafay.
Ra’iisul Wasaarihii hore Saacid, Madaxweyne ku-xugeynkii hore ee Jubbaland, Fartaag, xubno ka tirsan Golayaasha Baarlamaanka Dowladda Fadaraalka, iyo masuuliyiin kale ayaa hore u booqday qabriga M S Barre.